San Htun's Diary: Happy Belated Blog Day ! (Tag Post)
ဘလော့ဒေးဆိုတာ သတိရပေမယ့် လေဘာဒေးပိတ်ရက်မှာ ခရီးထွက်နေတာနဲ့မနေ့ က ဘလော့ဆီ ပြန်ရောက်တော့မှ စီနီယာဘလော့ဂါ ကိုရန်အောင် တဂ်ပို့ စ်အတွက် ဘလော့ဂါမောင်နှမတွေ အသီးသီး ဟတ်ပီးဘလော့ဒေးထားတာ တွေ့ တယ်။ ဘလော့ဒေးဆိုတာ ဘလော့ဂါတွေအတွက် အမှတ်တရ နေ့ ပဲမလား။
မြန်မာပြည်မှာတုန်းက အင်တာနက်ဆိုတာ မကြီးနဲ့ဂျီတော့ဖို့ ၊ အီးမေးလ်ပို့ ဖို့ လောက်သာ သုံးဖြစ်တာ။ ဘလော့ဆိုတာကြီး စပြီးသိတာက ၂၀၀၉ ဖေဖေါ်ဝါရီ အင်တန်းဆင်းတယ့်အချိန်။ နေ့ လည်ဖက် ထမင်းစားပြီးချိန်ဆို ကျွန်မက ဝိညာဉ်သစ် စာအုပ်စင်၊ ဘားမီးကလပ်စစ်ဆိုဒ်က ဝထ္ထုတွေ ဒေါင်းပြီးဖတ်တယ်။ အေးပိုက နိုင်းနိုင်းစနေ၊ မမ ဘလော့တွေ ဖတ်တယ်။ စာအရှည်ကြီး ဖတ်ရတာ မကြိုက်တယ့် အေးပိုနဲ့ဘလော့က ပို့ စ်တိုတိုတွေက သူနဲ့ အကိုက်။ သူပြတယ့် ခြေလှမ်းပေါင်း ငါးထောင်ဆိုတယ့် ပို့ စ်ထဲကအတိုင်း အိအိနဲ့ ကျွန်မ Kent Ridge Park ၊ Telok Blangah Hill Park ၊ Hort Park ၊ Mount Faber Park ပန်းခြံလေးခုကို ၄ နာရီကြာ ဖြတ်ကျော်လမ်းလျှောက်ခဲ့ဖူးတယ်။
ဂျီမေးလ်အကောင့်ရှိရုံနဲ့ဘလော့တခုပိုင်ဆိုင်နိုင်ချိန်မှာ မကာအိုခရီးအကြောင်း ရေးချင်တာနဲ့ဘလော့ပြုလုပ်နည်း ပီဒီအပ်ဖိုင်ဒေါင်းပြီး ၂၀၁၀ မေလ ဒုတိယပတ်ရဲ့တခုသောနေ့ မှာ (ရက်အတိအကျ မမှတ်မိ) ဘလော့စဆောက်ဖြစ်တယ်။ ကျွန်မရဲ့ဒိုင်ယာရီဖြစ်တာမို့နာမည်ကိုလည်း စန်းထွန်းရဲ့ဒိုင်ယာရီလို့ ပဲ ပေးခဲ့တာပါ။ အဲဒီတုန်းက မြန်မာစာဖောင့် မရိုက်တတ်သေးတော့ ဘားကလစ်ခ်ျမှာ မြန်းကလစ်ခ်ျလိုရိုက် တဖက်မှာ ပေါ်လာတယ့် မြန်မာစာဖောင့်ကို ကော်ပီကူးပြီး ပို့ စ်ထဲထည့်။ ဒါေ့ကြာင့် အစောပိုင်း ပို့ စ်တွေမှာ စာလုံးပေါင်းတွေ မှားနေတတ်တယ်။ ၂၀၁၀ မေ ၁၆ မကာအိုခရီး ပို့ စ်နှစ်ပုဒ် ရေးပြီးတော့ ဇက်ညောင်း၊ လက်ညောင်း အတော့်ကို ဖားသွားလို့ဘလော့ကို စိတ်ကုန်သွားတာ တနှစ်ခန့် အကြာ ၂၀၁၁ ဖေဖေါ်ဝါရီ စတိတ်ကို ရောက်တယ့်အချိန်မှာမှ တကယ်စရေးဖြစ်တယ် ။
မြန်မာဆိုလို့တယောက်တည်းရှိတယ့် အရပ်မှာ အစားအသောက် မကောင်း၊ ရာသီဥတုအေး ၊ အမကျန် အဲလေ အထီးကျန် ၊ ပင်ပန်းဆင်းရဲလွန်းတယ့် ကျောင်းသားဘဝရဲ့ခံစားချက်တွေကို ဘလော့မှာ ဒိုင်ယာရီလို ရေးဖြစ်တယ်။ ကြုံတွေ့ ရတယ့် ဘဝအမောလေးတွေ၊ နည်းနည်းလေးတော့ လွဲနေတာလေးတွေ၊ သူငယ်ချင်းညီအစ်မတွေဖြစ်တယ့် ဆူနမ်၊ မိုင်းဖန်၊ ရာမားတို့ နဲ့ပျော်စရာလေးတွေ၊ စာသင်ခန်းထဲက အင်တာနေရှင်နယ် ဗရုတ်သုတ်ခ ကျောင်းသားတွေ၊ သွားခဲ့ဖူးတယ့် ခရီးတွေ၊ ရင်ဘတ်ထဲက ဖီလင်တွေ ရေးရင်း မတော်တဆ ဘလော့ဂါ ဖြစ်လာခဲ့တယ် ဆိုပါတော့။
ကျွန်မနှင့် ဇော်ဂျီဖောင့် ...
၂၀၁၁ မေလမှာ ဘော်လန်တီယာလုပ်နေတယ့် အန်ဂျီအိုအဖွဲ့မန်းနေဂျင်းဒါရိုက်တာ အစ်မက ဘာသာပြန်ခပေးမယ် ဘာသာပြန်ပေးပါလား ဆိုလာလို့ပိုက်ဆံရချင်ဇောနဲ့ဇော်ဂျီလက်ကွက် ကျင့်လိုက်တာ ၂ ရက်တောင် မကြာဘူး တဂျောင်းဂျောင်း ရိုက်တတ်သွားတယ်။ ဘာသာမပြန်လိုက်ရပေမယ့် ဇော်ဂျီလက်ကွက် တတ်သွားတယ့်အမြတ်အဖြစ် ဘလော့မှာ ပိုစ့် တွေ တဂျောင်းဂျောင်း တင်တော့တာပဲ။ သူများဆိုဒ်တွေ သွားလည် ကွန့် မန့် ချန် ( မားကဒ်တင်းဆင်း) ၊ Template လေးတွေ၊ စီဘောက်ထည့်နည်းတွေ ရှာဖွေထည့်။ ကိုညီလင်းသစ်ဆီက ကလစ်လိုက်ရင် Next Page မှာ ဖွင့်နည်း သိလိုက်ရတယ်။ မြန်မာစာဖောင့် သွင်းမထားတယ့် ဘရောက်ဇာမှာ မြန်မာစာမြင်ရအောင် အီးအိုတီထည့်နည်းဆိုတာ ခုထိမစမ်းရသေးဘူး။ ဘလော့ဂါဖြစ်ပြီးမှ ထူးခြားတာက မြင်မြင်သမျှ ဓာတ်ပုံရိုက်တယ် ဘလော့ပေါ်တင်ဖို့း) ။
ဘလော့ဂါတွေရဲ့စိတ်ပါဝင်စားမှုအပါ် မူတည်ပြီး ပို့ စ်တွေက ဟင်းချက်နည်းတွေအကြောင်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်၊ သွားခဲ့ဖူးတယ့် ခရီးတွေအကြောင်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်၊ လုပ်ငန်းခွင်ထဲက အဆီအငေါ် မတည့်တယ့်အကြောင်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်၊ မိသားစုအကြောင်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဗရုတ်သုတ်ခကြတယ့်အကြောင်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်၊ လျှော့ပင်းထွက်ခဲ့တယ့်အကြောင်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်၊ နည်းပညာအကြောင်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်၊ ကဗျာတပုဒ် ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်၊ သရဲအကြောင်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်၊ စာအုပ်၊ ရုပ်ရှင်၊ သီချင်း ရီဗျူး ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်၊ စိတ်ကူးယဉ် ဖန်တီးချက်တွေ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ ပို့ စ်တခု ရေးဖို့ အတွက် ခံစားချက်၊ အချိန် အတိုင်းအတာ တခုအထိတော့ ပေးဆပ်ရပါတာပဲ။ ပိုက်ဆံမရပေမယ့်လည်း ဗိုက်တာမင်အားဆေး ကွန့် မန့် လေးတွေက ဘလော့ဂါတွေကို အားသစ်လောင်းပေးတယ်။ ဘလော့ဆိုတာ ကျွန်မတို့ရင်ဘတ်ပင်လယ်ထဲက ခံစားချက်လှိုင်းလေးတွေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပေါက်ကွဲလို့ ရပေမယ့် ကိုယ်ရေးတယ့်စာကို ကိုယ်တာဝန်ယူရမယ်ဆိုတယ့် ကမ်းခြေလေးနဲ့လှလှပပ အနားသတ်ပေးထားတယ်။
အစ်မလည်း ဒီလိုခံစားဖူးလို့ကိုယ်ချင်းစာပါတယ် ဆိုတယ့် မမမေ၊ သွားနိုင်တုန်း သွားထား စန်းထွန်းရေ ရိုက်သာရိုက်၊ တင်သာတင်၊ အားပေးဖို့ က ကိုယ့်တာဝန် ဆိုတယ့် မမအိုင်အိုရာ၊ ရပ်ကွက်ထဲမှာတော့ဗျာ စီးရီးတွေ ရေးဖို့အားပေးတတ်၊ စာလုံးပေါင်းမှားနေရင် ပြင်ပေးတတ်တယ့် ဆြာဟန်၊ ဘလော့ကောင်းလေးပဲ ညီဆိုပြီး လူမသိ သူမသိ ကျွန်မဘလော့လေးကို ဆက်လက်ရပ်တည်ဖို့အားအင်တွေ ပေးခဲ့တယ့် ကိုညိမ်းနိုင်၊ ကျွန်မဘလော့ကို ပထမဆုံး လင့်ခ်ချိတ်ပေးတယ့် ကြောင်မျိုး၊ ကျွန်မ ဘလော့စရေးခါစမှာ လာလာအားပေးတတ်တယ့် ဘလော့ပိတ်လိုက်ပြီဖြစ်တယ့် မရို့ စ်၊ သူ သားမွေးရင် ကျွန်မနဲ့ပေးစားမယ်လို့ကတိပေးထားတယ့် ယောက္ခမကြီး ဘေဘီတေ့စတာ၊ ခံယူချက်ခြင်းတူတယ့် မချော၊ စာကြည့်တိုက်ချစ်သူ ပို့ စ်လေးကို စာမျက်နှာထက် အက္ခရာတင်ပေးတယ့် အစ်မမြသွေးနီ၊ စုတ်ရော၊ လာဘ်ပါ ဝင်ဖို့ဆုတောင်းပေးတတ်တယ့် မမယ်သံ၊ လာလာချောင်းပြီး လာလာအော်တတ်တယ့် မမီးငယ်၊ ကျွန်မဖုန်း ဝေါပေပါ သစ်တောအုပ်လေးက ငါးမျှားခြင်း ပို့ စ်ထဲက ဒုတိယမြောက် ဓာတ်ပုံလေးနော်လို့သေသေချာချာ မှတ်မိနေတယ့် ကိုညီလင်းသစ်။ ဒီလိုမျိုး ဘလော့ရေးဖော်ရေးဖက် မောင်နှမတွေ ( သူတို့ အားလုံးနဲ့ကျွန်မ စကားမပြောဖူးသလို အွန်လိုင်းမှာလည်း မဆုံဖူးဘူး တချို့ ဆို ရုပ်တောင် မမြင်ဖူးဘူး) ၊ စာလာဖတ်သူတွေ ချန်သွားတယ့် ကွန့် မန့် တွေက ဘလော့ကို ကျွန်မ စွဲစေတယ့် အရာတွေပါ ။
ဖေ့ဘွတ် vs ဘလော့...
ဖေ့ဘွတ်က ဓာတ်ပုံတွေ ရှယ်လို့ ကောင်းတယ်၊ တဂ်လို့ ကောင်းတယ်၊ စတေးတပ်တွေနဲ့ဖီလင်ကို ဖော်ပြလို့ ကောင်းတယ်၊ ဘယ်နေရာမှာ ဘာလုပ်နေတာ ချက်ကင်းလို့ကောင်းတယ်၊ ဖိဘက်ခ် မြန်တယ်။ ကျွန်မအတွက်တော့ ဖေ့ဘွတ်က လှိုင်းတဝုန်းဝုန်း ရိုက်ခတ်နေတယ့် ပင်လယ်လို စွဲမက်ဖို့ ကောင်းတယ်။ ဘလော့က ငြင်ငြင်သာသာလေး စီးဆင်းနေတယ့် မြစ်တစင်းလို အေးချမ်းတည်ငြိမ်တယ်။ သူငယ်ချင်းတွေ၊ မိတ်ဆွေတွေနဲ့ကူးလူးဆက်နွှယ်ဖို့ဖေ့ဘွတ်ကို သုံးနေမှာဖြစ်သလို ကျွန်မရဲ့စိတ်ဝိညာဉ် နားခိုဖို့ အတွက်လည်း အချိန်ရရင် ရသလို၊ ရေးချင်စိတ်တွေ ရှိနေခဲ့ရင် ဘလော့မှာ ဆက်ရေးဖြစ်နေဦးမှာပါ။
ထုံးစံအစဉ်အလာအရ ဘလော့အသစ် ငါးခုကို မိတ်ဆက်ပေးရမှာပါ။ ကျွန်မက ဘလော့သိပ်မလည်ဖြစ်တော့ ကျွန်မသိတယ့် ဘလော့တွေကိုပဲ ညွှန်းဆိုပေးပါရစေ။
ဘလော့ဂါ မောင်နှမတွေ၊ ရောက်ရှိကြောင်း အသံပေးခဲ့သူတွေ၊ ခြေရာမချန်ဘဲ တိတ်တိတ်လေးလာ တိတ်တိတ်လေး ပြန်ထွက်သွားကြတယ့် စာလာဖတ်သူတွေ...
ဟတ်ပီး ဘီလိတ်တက် ဘလော့ဒေး ပါဗျို့ ...
ဘလော့ဂါတွေလည်း စာတွေ အများကြီး ရေးနိုင်ပါစေ...
စာဖတ်သူတွေလည်း စာတွေ အများကြီး ဖတ်နိုင်ပါစေ...
စက်တင်ဘာ ၅ ၊ ၂၀၁၃။
ပြောင်းရွှေ့ ရေးလုပ်နေတာနဲ့ ၊
ဒီဘလော့လေးက ကိုယ်တို့ ရဲ့ ၊
ကမ္ဘာကြီး ၂ခုခွဲထားတာ...လေ :P
ဟတ်ပီး ဘီလိတ်တက် ဘလော့ဒေး ..
I like Your Blog.Keep going on
“ဘလော့ဆိုတာ ကျွန်မတို့ရင်ဘတ်ပင်လယ်ထဲက ခံစားချက်လှိုင်းလေးတွေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပေါက်ကွဲလို့ ရပေမယ့် ကိုယ်ရေးတယ့်စာကို ကိုယ်တာဝန်ယူရမယ်ဆိုတယ့် ကမ်းခြေလေးနဲ့လှလှပပ အနားသတ်ပေးထားတယ်။...”
တင်စားချက်လေးကိုတော့ သဘောကျသွားပြီ ညီမရေ...၊း)
ကျင်လည်နေရတဲ့ ကျောင်းသူဘဝ၊ သူငယ်ချင်းတွေဘဝ စတာတွေကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ ရေးဖွဲ့နိုင်တဲ့ ညီမစန်းထွန်းရဲ့ ပို့စ်လေးတွေကို ကြိုက်တယ်၊ သစ်တောအုပ် စိမ်းစိမ်းလေးလို လတ်ဆတ်၊ စိမ်းစိုတဲ့ ဘလော့ဂင်း နေ့ရက်တွေ ပိုင်ဆိုင်ပါစေဗျာ။း)
အလုပ်ထဲမှာလည်းတခါက Samples တွေ FedEx ပုို့ တော့ စင်စင်နာတီ ...တဲ့။ ဟင် ဒီနံမည်ငါရင်းနှီးပြီးသား။ စန်းထွန်းရေးတဲ့မြို့ လေးပဲဆုိုပြီးဘယ်သူမှမသိပဲ တယောက်တည်းသတိတွေရ။
နောက်တခါ..အလုပ်ထဲကသူတယောက် က ဗကေးရှင်းအုိုင်အိုဝါကို ပြန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောတော့ ကုိုယ့်မှာ အို်င်အိုဝါအကြောင်း ကိုစိတ်ဝင်တစားပြောဖြစ်ပြန်ရော။ စာရေးဆရာမတစ်ယောက်က အုိုင်အိုဝါခရီးစဉ်အကြောင်းရေးထားတာကုိုယ့်မှာစန်းထွန်းနေရာလေးဆုိုပြီး သွားသွားဖတ်ဖြစ်ပြန်တယ်။
ဟုိုနားဒီနားသွားရင်တောင် တစ်ယောက်တည်းကားမောင်းပြီးခရီးရှည်ကြီးသွားခဲ့တဲ့စန်းထွန်းလေးကို ပြန်ပြန်စိတ်ပူတုန်း။ ဒီမှာ ပြန်ပေးဆွဲ လူသတ် ရိတ်ပ်လုပ် တဲ့သတင်းတွေမြင်ရတုိုင်း အကြောက်အရွံ့ မရှိသွားခဲ့တဲ့ သတ္တိခဲ စန်းထွန်းလေးကို သတိရတုန်း။ စကားမပြောဖူးပေမဲ့ ဒီလိုသံယောစဉ်တွေအပြည့်နဲ့ ပါ။
ညီမစန်းထွန်း ရေ ဘလော့ဂ်ဒေး မှာ အမှတ်တရ မလေးကို မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
Blogging Sphere ကြီး ပြန်လည်သက်ဝင်လာပြီ ဟု ယူဆရင်း ... အမှတ်တရ ပို့စ်များ ရေးကြတဲ့ Blogger ကြီးများ နဲ့ ထပ်တူထပ်မျှ ၀မ်းသာမိပါကြောင်း ... :)
ဒီတဂ်ကတော့ စန်းထွန်းတစ်ယောက် အင်တိုက်အားတိုက်ကို အချိန်ပေးပြီး ကြဲထားတာပဲ...ကျကျနန လှလှပပ သေသေသပ်သပ် စီကာပတ်ကုံး...အင်း ဆက်ပြောရင် ကြိယာဝိသေသနတွေ ကုန်သွားမယ်ထင်တယ်...
ဦးဟန်ကြည်တော့ အလုပ်ပိနေလို့ တဂ်ပို့စ်ကို ကသုတ်ကရက်ရေးလွှတ်လိုက်ရတယ်...း)
စန်းထွန်းက ရေးလက်ရှိပြီးသားပဲ...အဖွဲ့အနွဲ့ပိုင်း တင်ပြမှုပိုင်း အားလုံးပြည့်စုံတဲ့ ဘလော့ဂါ...ခရီးသွားမှတ်တမ်းတွေကို ကျကျနန ရေးတာများ မေတ္တာဦးနဲ့တောင် ခပ်ဆင်ဆင်...စာလုံးပေါင်းလေးတွေ အကြံပေးရတာက လှပြီးသား အရေးအသားကို ပိုအရောင်လက်အောင် လက်တို့တဲ့သဘောပါ...
ညီမစန်းထွန်းရေ ပေါ်တော်မူပို့စ်လေးမှာ ဦးဦးဖျားဖျားလာမန့်သွားလို့ ကျေးဇူးအထူးပါ။ ဘလော့မှာ ပို့စ်တွေ ဆက်ရေးဖြစ်နိုင်အောင်လဲ တတ်နိုင်သလောက်တော့ ကြိုးစားပါ့မယ်ကွယ်။ မျှော်နေတယ်ဆိုလို့ ကိုယ်မရေးဖြစ်ခဲ့တာကို အားတောင်နာမိတယ်။
တက်ဂ်ပို့စ်လေး ရေးပေးလို့ ကျေးဇူး Sis ရေ. ဒီပို့စ်လေးကို Myanmar Blogs Digest Page လေးမှာ တင်ပေးဖို့ ယူသွားပြီနော်.
စာကောင်းပေမွန်လေးတွေ ဆက်လက်ရေးသားပြုစုနိုင်ပါစေလို့လည်း ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်.
ရေးတတ်လိုက်တာနော် ... .. ဒီနှစ်လိုပဲ နောက်နှစ်တွေလည်း အခုလို စည်စည်ကားကားလေး ဖြစ်နေပါစေလို့ မျှော်လင့်မိတယ် ...Happy Blog Day ပါ စန်းထွန်းရေ...:) နောက်ကျသွားတာ ခွင့်လွတ်..ပါလို့..:)
ချီးကျူးပါတယ်။ မြန်မာဖောင့် မနိုင်ခင်ကထဲက ဘလော့ပိုးထလာတာကို။း)
ဆက်လက်ချီတက်ပါ ဆန်းထွန်းရေ။ မြန်မာဘလော့လောကလေး မတိမ်ကောပါစေနဲ့။
အခုလက်ရှိကနေ နောင် နှစ်တွေ များစွာတိုင်ပါစေနော်..
သူလည်းကိုယ့်ကို မှတ်မှတ်ရရရှိနေတုန်းပဲကိုးး)
ကျေးဇူး ဆက်လက်ပြီး ပျော်ရွှင်စွာ ဘလော့ကြပါအုံးစို့နော့် ။